Mashup Camp ino svondo rino muMountain View, CA | Martech Zone
Vhiki rino, ndinosuruvarisa ndiri parutivi panguva yeMashup Camp. Basa rangu idzva remabasa rakandidhonzera kumashure kubva kuKubatanidzwa uye zvimwe mukutungamira kwechigadzirwa. Gore rakapera ndakaenda kuMashup Camp yekutanga yegore uye nekukurumidza ndakavaka hushamwari neboka rine tarenda revanhu vakavaka chirongwa ichi. Muchokwadi, ini ndinonyatso gamuchira Mashup Camp mawebhusaiti uye ndakagadzira logo iyo yavari kushandisa gore rino.
Kuenda kumisasa iyi, imwe inonyatso kufemerwa nehuchenjeri uye tarenda rezvemabhizimusi iro rakaunganidza mukamuri imwechete. Ava ndivo vakomana vanosundira tekinoroji kumiganhu yayo, vachivaka kusangana kwakanyanya kusimba pakati pemasevhisi nemaapplication pamapuratifomu akasiyana, mitauro, uye zvivakwa. Mamwe madhemoni aunoona akanyatso kukubhowa.
Kushandira an API mupi, zvaitonyanya kufadza nekuti wakavakira maficha kuti mumwe munhu ashandise, asi hauna kumbofungidzira kuti vanhu vanozobatanidza matekinoroji ako muzvigadzirwa zvavakagadzira nenzira yavanayo.
Kana iwe uri muMountain View, CA, vhiki ino uye kukanzura mutambo wako wegorofu uye enda kuMashup Camp. Chinhu chisina kujairika chinokusiya iwe nemamirioni mazano ekuti ungawedzera sei chako chigadzirwa zvigadzirwa. Mhoro kuna David Berlind kwandiri (paanowana mukana wekubata mweya wake!). David anobatsira mukudhonza chiitiko chikuru ichi uye aine zvigunwe zvake paMashup pulse.
Chokwadi dai ndaivapo!
Tags: david berlindmashup musasakuona gomo